Qabsoo roga hundaan jabeessuu fi tokkummaan dhaabbachuun bilisummaa Oromiyaaf wabii dha. - Welcome to bilisummaa
Qabsoo roga hundaan jabeessuu fi tokkummaan dhaabbachuun bilisummaa Oromiyaaf wabii dha.
bilisummaa May 22, 2015	Leave a comment
Ibsa ABO jijjiramaa haala yeroo irratti.
Ilmaan Oromiyaa bilisummaa sabaa fi abbaa biyyummaa isaanii goonfachuuf qabsoo hadhooftuu fi haarsaa guddaa gaafachaa jiru yeroo dheeraaf gaggeessaa jiru. Qabsoon bilisummaa fi mirga dimokraasii goonfachuuf taasifamaa jiru, yeroo kamuu caala muldhataa fi danboobaa ta’ee qarqara injifannoo isa mahii gahaa jira. Keessumaa dhalooti qubee qabsoo kaleessa abbootiin keenya kumaatamaan itti wareegamanii sadarkaa amma irra jirruun nuga’an, abbummaan ofitti fuudhatee qabsoon finiinsaa jiru abdii Oromiyaa boruu ta’ee jira.
Mirgaa fi bilisummaa Oromiyaaf jaarmiyaaleen siyaasaa Oromiyaa gara garaa bifaa fi amala qabsoo gara garaa qabu ka’umsa godhatanii ummata Oromoo ijaaruu fi dammaqsuun isaanii diinni amma fedhe iyyuu Oromoo fi Oromiyaa irratti roorrisusi dhabamuun isaa kan hin oolle ta’uun mirkanii dha. Qabsoon bilisummaaf taasifamu biyya keessaa fi biyya ambaatti ilmaan Oromiyaa ijaarsa gara garaa jalatti taasisaa jiran dammaqiinsaa fi guddina siyaasa Oromoo muldhisa.
Sirni abbaa irree Wayyaaneen guddina qabsoo Oromoo keessumaa dhaloota qubee irraa sodaan inni qabu boqonnaa isa dhoowwee jira. Aadaan qoqqoodanii bituu sirna Wayyaanee yeroo kamuu caala harkatti fashalee jira. Kanaaf jecha tokkummaa saba keenyaa fi qabsa’otaa laaffisuuf jecha jaarmiyaalee Oromiyaa maqaa gara garaa itti moggaasuun dhaaba kami akka Oromoof ta’u, akeekuufii dhama’a. Maqaa shororkeessaa fi yaada hin qabne jedhuun, ummata Oromoof jaarmiyaa isaaf malu akeekuu yaala. Akka kana duraa jala deemtuu fi ergamtuu isaa kan taate OPDOn yeroo kamuu caala ergama isaanii Oromiyaa keessatti raawwachiisuu dadhabanii jiru. Kun kan ta’eef sabboontotiin ilmaan Oromiyaa qabsoo roga hundaan taasisanii fi ilmaan Oromoo miindaaf jecha miseensa OPDO ta’an mooraa qabsoo sabaatti waanta makamuu jalqabaniifi. Kun sirna Wayyaaneetti mataa dhukkubbii guddaa itti ta’ee jira.
Filannoo fakkeessii Caamsaa 24, 2015 taasifamaa jiru kana ilmaan Oromoo Wayyaanee irraa, milkii fi bu’a qabseessummaa hin eegan. Wayyaaneen bifa kamiinuu sirna bicuu ta’ee otoo jiruu saba Oromoo wayyabaaf mirga isaa eegsisuu hin danda’u. Addi Bilisummaa Oromoo (ABO Jijjiramaa) filannoon Wayyaaneen itti jirtu kun akkuma kana duraa fakkeessii fi aangoorra bubbuluu sirna TPLF mijeessuun ala Oromoof fayidaa tokko hin qabu jedhee amana. Haata’uu garuu dhaabbileen siyaasaa Oromoo gara garaa ilmaan Oromiyaa mirgaa fi bilisummaa isaaniif akka falmatan haala rakkisaa keessatti ummata Oromoo dammaqsuu fi ijaaruudhaan danbalii jijjiramaa Oromiyaa keessatti dhalchuu isaanii ni dinqisifannaa.
Aadaa fi amala TPLF irraa ka’uudhaan filannoo fakkeessii irraa bu’aan akka hin argamne ABOn ijjannoo jabaa qaba. Kanaaf jecha jaarmiyaaleen Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran akkasuma, caasaan hawaasa Oromoo gara garaa dhimma bilisummaa saba keenyaa fi abbaa biyyummaa Oromoo irratti tokkummaan dhaabbachuun fardii dha. Diinni keenya kan nurra bubbule tokkummaa dhabiinsa hoogganoota jaarmiyaa siyaasa Oromoo fi caasaa hawaasa Oromoo akka ta’e hubachuun murteessaa dha. Kanaan booda garaagarummaa xixiqqaan sochii ummata keenyaatti gufuu ta’uun dhaabbachuu qaba. Hunda dura tokkummaan dhaabbannee dheebuu bilisummaa ummati keenya bara dheeraa ilmaan Oromoo itti wareegaman baasuu qabna.
Kanaaf jecha Addi Bilisummaa Oromoo (ABO Jjjiramaa) dhaabbilee siyaasaa fi caasaa hawaasaa gara garagaraaf tokkummaan dhaabbannee injifannoo Oromoo akka dhugoomsinu waamicha taasisa. ABOn dhaabni siyaasaa Oromoo kamuu bilisummaa fi mirga dimokraasii Oromoo dhugoomsuuf, toftaa fi amala qabsoo kamuu hordofuuf mirga qabu jedhee amana. Kanaaf jecha dhimmoota tokkummaan waloon hojachuu qabnu irratti xiyyeefachuun mooraa qabsoo Oromoo tokkoomuu qaba kan jedhu ijjannoo jabaa qaba. Dhaaba siyaasaa Oromoo kamuu kan jaarmiyaa kiyya malee dhaabbileen siyaasaa biraa mirgaa fi bilisummaa Oromoof falmuu hin danda’an jedhanii fi qoollifattoota tokkummaa qabsoo Oromoo ta’an, hundaaf akka aadaan akkasii kun yeroon irra darbee fi qabsa’aa kamuu biratti fudhatama kan hin qabne ta’uu hubachuun akka gara tokkummaa dhugaatti deebitan waamicha godha.
Dhuma irratti ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan qabsoo keenya qarqara injifannoo geessee jirtu kana galii isaan gahuuf tokkummaan dhaabbannee bilisummaa Oromoo fi abbaa biyyummaa keenya akka dhugoomsinu waamicha taasisa. Filannoon Wayyaanee bifa kamiinuu itti bahi isaa sirna bicuu TPLF aangorra tursiisuun ala fayidaa irraa argannu kan hin jirre ta’uu isaa beeknee danbalii bilisummaa yeroo ammaa roga hundaan uumamee jiru daran jabeeffachuudhaan tokkummaan akka falmannu waamicha goona.
Adda Bilisummaa Oromoo (ABO jijjiramaa)
Caamsaa 22, 2015
Previous “ Hin fakkaanne Fakkeesi Jedhe Oromoon”
Next Human right abuse in Ethiopia, the case of Oromoo